Soldiers patrol Zimbabwe Streets - The Zimbabwe Mail
HomeHeadlinesSoldiers patrol Zimbabwe Streets
Soldiers patrol Zimbabwe Streets
January 15, 2019 Staff Reporter Headlines, Political Violence Alert 0
HARARE (Reuters) – Zimbabwe’s military put on a show of force to deter further unrest on Tuesday after at least three deaths in violent protests over steep fuel price hikes, but continuing disorder blocked the flow of key supplies into the country.
A helicopter fires teargas onto protestors during a demonstration over the hike in fuel prices in Harare, Zimbabwe, Tuesday, Jan. 15, 2019. A Zimbabwean military helicopter on Tuesday fired tear gas at demonstrators blocking a road and burning tyres.
Mnangagwa, who is on an official visit in Moscow, said Zimbabwe was interested in receiving Russian loans and might need Moscow’s help in modernising its army, RIA news agency reported.
Soldier patrol as protestors gather during a demonstration over the hike in fuel prices in Harare, Zimbabwe, Tuesday, Jan. 15, 2019.
Security forces deployed in population centres to stave off further demonstrations, witnesses said, and people in Harare said they could no longer access the internet.
Amnesty, in a statement, said the internet was cut off to prevent people from supporting or organizing protests while critics said the government sought to prevent images of its heavy-handedness from being broadcast around the world.
A woman with a wounded leg during clashes between protestors and police, is transported in a wheelbarrow, during protests over fuel hikes in Harare, Zimbabwe, Monday, Jan. 14, 2019
With Zimbabwe’s banks strapped for cash, shipping essential daily commodities like rice and cooking oil to families from their relatives abroad has become a favoured alternative to cash remittances.